ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းသည်မလုံလောက်ပါ၊ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မေလ 27, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းကျွန်တော်ဟာပင်ပန်းနေတဲ့စကားစုပါ။ မူလအသုံးအနှုန်းကိုမည်သူရေးသည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာသော်လည်းယခုရာသီတွင်၎င်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ မကြာသေးမီကအနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်ဟီလာရီကလင်တန်အားမြေပြိုမှုတွင်ဘားရက်အိုဘားမားအဘယ်ကြောင့်အနောက်ဗာဂျီးနီးယားဆုံးရှုံးခဲ့ရရကြောင်းဆွေးနွေးရန်ထိုအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူကအနောက်ဗာဂျီးနီးယားမှာလူမျိုးရေးပြissuesနာတွေရှိနေသေးတယ်၊ အတိုက်အခံအမြင်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးအချိန်အလုံအလောက်မပေးနိုင်သောကြောင့်အိုဘားမားကဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည် အသားကိုနှိပ်လက်ဆွဲနှုတ်ခြင်း၊
၎င်းသည်မည်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်စိတ်ဝင်စားသင့်သည် အသားကိုနှိပ် တကယ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရှိတယ်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေဟာမက်သမ်ဖက်တမင်းတွေအတွက်ဗျူဟာကျတဲ့ဒေတာဘေ့စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တူတယ်။ အားလုံးနှစ်ဖက်စလုံးမှသင်္ချာပါရမီများယူဆောင်လာပြီးအချိန်နှင့်တပြေးညီပစ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုကြားခံအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ကျက်။ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြသည် ဇာတိပကတိနှိပ်စက်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်နိုင်ငံရေးအမှိုက်ပြင်ပတွင်ဤနည်းပရိယာယ်များအလုပ်လုပ်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကဟီလာရီသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်သမ္မတလောင်းအဖြစ်ဆက်ဆံခံခဲ့ရပြီး၊ ဘားရက်အိုဘားမားသည်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများအဖြစ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အများစုကမေ့နေ သူ၏တိကျသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ အိုဘားမားဆိုဒ်ကိုကြည့်ပြီးပစ်မှတ်တိုင်းအတွက်သတင်းစကားကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာ Indianapolis မှာလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်တစ်ယောက်ယောက်ကိုယ်စားလှူနိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။ အိုဘားမား၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးသည် Indy ရှိစက်ဝိုင်း၏တောင်ဘက်တွင်ရှိသောရုံးခန်း ၁ ကွက်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပိတ်ခဲ့သည် ဇာတိပကတိနှိပ်စက်။ ငါသည်လည်းအိုဘားမားမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကနေတိုက်ရိုက်မေးလ်အချို့ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးအိုဘားမားဟာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့စက်တလုံးဖြစ်တယ်၊ ဖြစ်ရပ် ၄၂၀ အရှင်ဝေးနှင့်သွားကြဖို့တစ်တန်ပို။
အိုဘားမားဟာသူမလက်ကိုမနှုတ်မဆက်ဘဲအနောက်ဗာဂျီးနီးယားကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့မယုံဘူး။ ငါသူဆုံးရှုံးသွားတာကိုသဘောတူတယ် Appalachia နဲ့မတော်ဘူး.
ငါဘားရက်အိုဘားမားကိုသမ္မတအဖြစ်မတင်ပေးဘူး၊ ငါဟာသူနေရာချထားတဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစက်ကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်။ သူ့အသင်းလုပ်သမျှမှန်သည်၊ သူတို့အခွင့်အလမ်းဘယ်တော့မှလက်လွှတ်မခံကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည် ဇာတိပကတိနှိပ်.
ငါလူမှုမီဒီယာအတွက်အလယ်အလတ်အောင်မြင်မှုအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်, အထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာ Indianapolis ၌တည်၏။ စိတ်ဝင်စားစရာများစွာရှိသည် Indianapolis ဘလော့ဂါများ အဘယ်သူ၏အရိပ်ငါအနိုင်နိုင်အင်တာနက် stats ရှုထောငျ့မှကျသို့။ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်မှာ၊ ဒါပေမယ့်ငါရှေးရှေးတွေမှတ်မိတဲ့နာမည် (နှင့်မျက်နှာ) ပိုများလာတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။
ငါသည်ငါ့ဒေသဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုကြွေး ဇာတိပကတိနှိပ်။ ငါ့အလုပ် သေးငယ်အင်ဒီယားနား, ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြောင်း, 2012 Superbowl ကော်မတီနှင့်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအားလူမှုမီဒီယာအကြောင်းသင်ကြားရန်အခွင့်အရေးများယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ထက်များစွာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါဘလော့ဂ်ထဲထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမျိုချဖို့ခဲယဉ်းတဲ့ဆေးလုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် blogging ဆိုတာမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုလူတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်။
ထွက်သွားပါ ဇာတိပကတိနှိပ်စက်! ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘရိုရှာတစ်ခုမပေးနိုင်သောပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ရိုးသားမှုကိုပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မျက်လုံးတစ်စုံကိုကြည့်ခြင်းနှင့်သူတို့၏လက်ကိုလှုပ်ခြင်းတို့၏အတွေ့အကြုံကိုမပေးသေးပါ။
ငါကအမျိုးသားဖြစ်ရပ်များကိုမှလုပ်နိုင်ခဲ့လျှင်ငါသာ။ ကြီးမြတ်အမျိုးသားရေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူအများကြီးပိုကြီးတဲ့ဘလော့ဂ်ရှိသည်မယ်လို့သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ အချိန်ပြည့်အလုပ်နဲ့အမြဲတမ်းခက်ခဲပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်အတွက်တော့ဒီဟာအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
Tags: 2008ရှေးကောကျပှဲလူတစ် ဦးအစည်းအဝေးများအိုဘားမားနိုင်ငံရေးဇာတိပကတိနှိပ်စက်အရောင်းစွမ်းအား
မေလ 28, 2008 မှာ 8: 06 AM
ကောင်းမွန်မျှတသောအမြင်၊ Doug။ အမေရိကန် အမျိုးသမီး ၁,၀၀၀,၀၀၀ မှ တဦးလျှင် ဒေါ်လာ ၁၀၀ စုဆောင်းရန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ကလင်တန်၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အကြီးအကဲများထဲမှ တဦးကို စောစောစီးစီး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည့် ဤလွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်တွင် ဖတ်ခဲ့သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို သတိရမိစေရန် သင့်ဘလော့ဂ်တွင် သတိရစေပါသည်။
တကယ့်ကို အမိုက်စား အယူခံဝင်မှုပါ။ သို့သော် အခြားမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှူးက အဆိုပြုချက်ကို ပယ်ချခဲ့သည်။ (နောက်ပြီး ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက မိုက်ခရိုရန်ပုံငွေရှာနည်းကို သုံးပြီး အောင်မြင်နေလဲ သိပါတယ်- အိုဘားမား။)
"အသားကိုနှိပ်ခြင်း" နှင့်အင်တာနက်နည်းပညာများနှင့် ပတ်သက်၍- တစ်ခုချင်းစီသည်ကွဲပြားခြားနားသောအမြတ်ဝေစုကိုပေးသည်ထင်ပါတယ်။ အချို့သော ဖောက်သည်များ (သို့မဟုတ် မဲဆန္ဒရှင်များ) သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်သာ ထိမိပါလိမ့်မည်။ သင့်တွင် အင်တာနက်မရှိပါက အခြားသူများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ရလဒ်များကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် နှစ်ခုလုံးလိုအပ်သည်။
(ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ယောက်က vanilla ဒါမှမဟုတ် ချောကလက်ရေခဲမုန့်ကို ရွေးပေးတုန်းက ပြောဖူးသလိုပဲ- "ဟုတ်!")
မေလ 28, 2008 မှာ 5: 29 pm တွင်
Doug: ငါလုံးဝသဘောတူတယ်။ အတ္တလန်တာမှာ ဒီထက်ပိုပြီး ချီးကျူးမှုတွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ Atlanta ဝဘ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် အခြားသော ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများနှင့် ပွဲများကို ကျွန်ုပ်တက်ရောက်ပြီး ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ယခင်ကထက် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ငါ့ဘလော့ဂ်. ထို့အပြင်၊ ကီးဘုတ်နှင့် ကွန်ပြူတာစခရင်နောက်ကွယ်တွင် တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းထက် လူများနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိခြင်းက ပို၍အကျိုးရှိစေပါသည်။
မေလ 29, 2008 မှာ 9: 30 pm တွင်
ဟုတ်ကဲ့၊ Truffle Media တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပွဲလမ်းသဘင်များတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည် (ကမ္ဘာ့ဝက်သားကုန်စည်ပြပွဲသည် စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် လာမည့်အပတ်ဖြစ်သည်-) ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်ဖုန်းအဟောင်းများနှင့် အီးမေးလ်များကို ထိတွေ့ရန်အတွက် အခြေခံများကို အသုံးပြုပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေးကို စိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေဖို့ မီဒီယာ ချန်နယ်အသစ်တွေကိုလည်း အသုံးပြုပါတယ်- Twitter (http://twitter.com/trufflemedia), SwineCast.com (အမဲသား၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ကြက်၊ နှင့် သီးနှံများအတွက် ၎င်း၏ညီမဆိုဒ်များ) ဘလော့များ/ပေါ့တ်ကာစ်များ၊ Flickr (http://www.flickr.com/photos/trufflemedia/), နှင့် Blip.tv (http://trufflemedia.blip.tv/).
ဒါပေမယ့် လူတွေစိတ်ဝင်စားတာကို နားထောင်ဖို့၊ လက်ထဲမှာ ဘီယာတစ်ပုလင်းနဲ့ စကားစမြည်ပြောပြီး ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ အကြောင်းအရာတချို့မှာ သိမ်ငယ်စိတ်/ကိုယ်ခန္ဓာဘာသာစကားကို ကြည့်ရတာ (အစားအစာအတွက် ပြောင်းဖူး ဒါမှမဟုတ် လောင်စာအတွက် ပြောင်းဖူးဆိုတာ လူကြိုက်များတဲ့ စကားဝိုင်းတစ်ခုပါ။ အိုင်အိုဝါ :)
Doug ကို ထပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇွန် 7, 2008 မှာ 11: 20 pm တွင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Blog Tour တွင် နိုင်ငံအနှံ့ မိုင် 10,000 ခရီးထွက်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်ပိုင် F2F လူမှုကွန်ရက်၏ စွမ်းအားကို အခိုင်အမာ ယုံကြည်သူဖြစ်သည်။ ရယ်မောခြင်းဟာ ရယ်မောခြင်းနဲ့ယှဉ်ရင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူး။
ဇွန် 11, 2008 မှာ 3: 53 pm တွင်
Doug - ပို့စ်ကောင်းလေး၊ ငါ့လူ။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အပြုံးသည် အရောင်း၊ ကွန်ရက်နှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းတွင် အခြားအရာများထက် ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည်။
မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်သည် အချိန်ပြည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်ကတည်းက ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယမြောက်အလုပ်တစ်ခုသာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ အင်တာဗျူးတွေမှာ လူတိုင်းက “ဦးဆောင်လမ်းပြ/စီးပွားရေးတည်ဆောက်ဖို့ ဘာလုပ်မလဲ” လို့ မေးပါတယ်။ သံသယမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကွန်ရက်သည် ၎င်းတို့ထံမှ ညွှန်းပို့မှုများကို ကျွန်ုပ်ရရှိသောကြောင့် ဦးဆောင်သူများ၏ အကြီးဆုံးရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးထားမှုနှင့် လူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှုများ ယူဆောင်လာမှသာ ၎င်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အီးမေးလ်ပို့တဲ့အခါ “လက်ဆွဲ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးပါတယ်။ “တနေ့နေ့ မင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ ငါမျှော်လင့်တယ်” ဆိုတဲ့ စာသားထဲမှာပါတဲ့။ ငါက ...... "အသားကို နှိပ်ပေး" တဲ့ ပရိသတ် မဟုတ်ဘူး ။ အသံက တစ်မျိုး....အသားမာတယ်။